‘तैंले गर्व गर्न लायकको काम गरिस्, स्याब्बास्,’
Sat, Apr 21, 2018 | 03:58:24 NST
12:51 PM (6 months ago)
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले झण्डै ६ महिना वैदेशिक रोजगार विज्ञका रुपमा रहेर सहयोग गरें । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, ती सबै मेरा प्लान थिए । जति काम भए ती मेरा प्लानका २० प्रतिशत काम पनि थिएन । गर्नु अझै धेरै थियो ।
२०६६ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीको विषय अध्ययन गर्दै आएको थिएँ । लाग्थ्यो, मसँग यो क्षेत्रमा उत्पन्न हरेक समस्याको समाधान छ । त्यसलाई सञ्चारमाध्यमबाट अगाडि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कान्तिपुर टिभीबाट ‘सेफ माइग्रेसन’ कार्यक्रम चलाएँ ।
तीन महिनासम्म पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिएन । राम्रा सोचका साथै विकृतिहरुको उजागर गरियो । तर, सरोकारवालाहरुले वास्तै नगर्ने । लाग्यो, पत्रकारको काम त फगत भुक्ने मात्रै रहेछ । त्यसैबेला सोचेको थिएँ, कुनै दिन यस्तो ठाउँमा पुगुँला अनि जान्दो गर्छु ।
नभन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. ऋषि अधिकारी आउनुभयो । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतको कार्यकाल सकेर फर्केपछि उहाँसँग मेरो एक पटक भेटघाट भएको थियो । त्यसबेला सामान्य चिनजान भयो ।
उहाँलाई मैले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार्ने राम्रो अवसर भएको भन्दै मेरो ‘कन्सेप्ट’ पठाएँ । उहाँले पढेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएछ । सायद त्यो कन्सेप्ट प्रधानमन्त्रीले पनि पढ्नुभयो । मलाई तुरुन्तै बोलाएर जिम्मेवारी दिनु भन्नुभएछ ।
राम्रो गरेर देखाउने दवाव प्रचण्ड सरकारलाई थियो । त्यस्तोमा म एक कडी बनें, वैदेशिक रोजगारका लागि । म त्यहाँ नपुग्थें त सायद बीमा र क्षतिपूर्ति वापत २७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था नै आउने थिएन । २ वर्षदेखि अड्किएको वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन अझै पर धकेलिन्थ्यो वा हुने नै थिएन । नियमावली आयो, जसले कामदार र तिनका परिवारलाई अत्याधिक लाभ सहित सुरक्षित तुल्याएको छ ।
प्रचण्ड सरकारको आयु पहिले नै तोकिएको थियो । त्यसैले म म्यादी जागिरमा थिएँ । कपाल नपाकुन्जेल र लठ्ठी टेकेर हिँड्ने बेलासम्म मलाई काम गर्ने अवसर थिएन । सिमित समयमा भद्रगोल भएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने चुनौती थियो मलाई । कसैको दवाव भने थिएन ।
त्यसमाथी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको महसुस होला भन्ने अर्को डर । काम असिमित तर समय सिमित । हुन त जागिर मात्रै खाएर निस्केको भए पनि हुन्थ्यो ।
तर मनले जहिले आफैंलाई सोध्थ्यो, ‘तैंले त्यस्तो के काम गरिस् जसप्रति तँ आफंैलाई गर्व लागोस् । तँलाई किन मानिसले सम्झिने ? तँ मर्दा तेरो अभाव कोही कसैलाई किन खड्किने । तेरो मृत्युमा कोही किन दुःखी हुने ?’ मनमा आउने यस्ता प्रश्नले मलाई बारम्बार झक्झक्याइरहन्थ्यो । जब मनले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने अह्राउँछ, त्यसबेलाको नतिजा बेग्लै हुँदोरहेछ ।
मतलव एकाएक ग्लानी, आवेश र जोस उत्पन्न हुने । प्रधानमन्त्रीलाई यो ठाउँमा बसेर सहयोग गर्ने अवसर जो कसैलाई मिल्दैन । मैले क्षमता देखाउने दुर्लभ अवसर पाएको थिएँ । त्यसैले त्यो ६ महिना मेरो जिन्दगीको एक परीक्षा थियो । जीवनलाई सार्थक बनाएर ग्लानीबाट मुक्त हुने अवसर थियो ।
विदेशमा मृत्युदण्ड तथा जन्मकैद सुनाइएका, लाखौं रुपैयाँ ब्लडमनी र जरिवाना मागिएकाहरुको आमाबुवा, श्रीमती आए भक्कानिनुहुन्थ्यो । उनीहरुसँगै डाको छोडेर रुन मन लाग्ने । तर पनि ढाडस र भरोसा दिलाएर भारी मनले बिदा गथ्र्यौं, हामी छौं नि भन्ने आभाष दिलाएर ।
तर, ढोका बाहिर नपुग्दै सहयोग गर्न पो नसकिएला कि भन्ने डर उत्पन्न हुन्थ्यो मनमा । र पनि ,धेरै को समस्या समाधान गर्न सक्याैं । टर्कीमा अपहरणमा परेकाहरुको सकुशल उद्धारदेखि बुल्गेरिया, कुर्दिस्तान जस्ता देशमा फसेकाहरुलाई फर्काइयो । उद्धार त अरु सयौंलाई पनि गरियो ।
जो जसले मलाई भेटे, डा. ऋषिलाई भेटे उनीहरु कहिल्यै निराश हुनु परेन । हरेकको काम उनीहरुकै सामु गरिदिने कोशिष गर्थ्याैं । यद्यपी कतिपय काम नेपाल सरकारको हातमा थिएन ।
जुन ठाउँमा बसेर मैले काम गरें, साह्रै दुःखले भरिएका कहानी सहितका व्यक्तिहरु भेटिए । मलाई लाग्छ, भोगाई र दुःखबाट पाठ सिक्नुपर्छ । गल्ति गर्ने, भोग्ने, पछारिएर उठ्ने र उठेर अघि बढ्नेहरु समाजमा धेरै छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनमा मेरो योगदान भएकोबारे धेरैलाई थाहा नहोला । सम्झिने पनि खासै नहोलान् । तर पनि म हृदय देखि नै खुसी छु । मनले पनि हिजोआज कुनै प्रश्न सोध्दैन । बरु भन्छ, तैंले गर्व गर्न लायकको काम गरिस् । स्याब्बास् ।